Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Iza ireo kandidà lehibe ho filoham-pirenena? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jona 2018 5:37 GMT 1	 · Mpanoratra Blogueurs invités Nandika Naomy
Fifidianana eto Madagasikara an-torohain-tsary nataon'i Madatsara
[Lahatsoratra nosoratan'i Andry R. Razafimbahoaka, mpanoratra nasaina. Nisy novain'i Global Voices avy eo ny lahatsoratra hampazava azy kokoa sy amantarana ny tokotanin-tsehatra]
Tsy maintsy mandeha mandrotsa-bato  hifidy izay ho filoham-pirenena mialoha ny fotoam-pahavaratra, izany hoe alohan'ny oktobra 2018 farafahatarany, ny Malagasy. Izany no fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana (HCC) hamaranana ny fanjavozavoana ara-politika sy ny fihetsiketseham-panoherana. Saingy tsy manome antoka ny lasan'ireo kandidà lehibe ho filoham-pirenena.
Nanapa-kevitra ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana (HCC) tamin'ny 28 avrily, amin'ny handidiana ny fananganana governemantan'ny marimaritra iraisana. Nanomboka ny asany izany tamin'ny 12 jona ary iraka ampanaovina azy ny hamoahana ny firenena amin'ny krizy politika amin'izao fotoana izao. Notendren'Atoa Hery Rajaonarimampianina ho filohan'ny governemanta Atoa Christian Ntsay , mpiasa ambony ao amin'ny Fifandaminana Iraisampirenen'ny Asa. Manomboka izao, amin'ireo minisitra 30 mandrafitra ny governemanta, dia [folo mahery] no avy amin'ny mpanohitra.
Tsy maintsy mametra-pialana roa volana mialoha ny fihodinana voalohany ny filoha Rajaonarimampianina, araka ny voalazan'ny lalampanorenena malagasy, raha te-hirotsaka hofidiana ho filoha. Na dia mbola tsy nilaza na inona na inona aza izy, dia be ny herijika manondro fa hirotsaka ho kandidà hifaninana amin'ireo kandidà roa hafa efa filoha teo aloha izay manana lasana mampiady hevitra ihany Atoa Hery Rajaonarimampianina.
Madagasikara, firenena voahozongozon'ny krizy
« Mangirifiry ary tsy miala mihitsy, mampahatsiahy mandrakariva ny tsy fahamarinan-toeran'ny firenena ireo krizy malagasy [miverimberina] », hoy ny nosoritan'Andriamanambe Raoto, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Politikà. Ho an'io mahay tsara ny tantaran'ny nosy io, notapatapahin'ny krizy politika miverimberina hatrany ny fihodinan'ny fitomboana sy ny fampandrosoana.
Hoy ny fitarainany  hoe:
Isaky ny ahitana fiaingana i Madagasikara, dia miafara amin'ny krizy ara-politika lehibe hatrany izay mampihemotra ilay fihetsehana miabo izany taona vitsivitsy aty aoriana.
Nanomboka tamin'ny 21 avrily 2018, nanao fihetsiketsehana manohitra ny lalam-pifidianana izay heveriny ho manilika an'i Marc Ravalomanana sy i Andry Rajoelina, samy filoha teo aloha sady kandidà lehibe amin'ny fifidianana hoavy, ny mpanohitra an'i Hery Rajaonarimampianina. Hita tokoa manko fa ny andininy faha-6 dia mandrara izay olona rehetra efa voaheloka tsy hirotsaka hofidiana.
Fa ny fahantrana mihalalina no mbola manahirana ny mponina hoy i Mireille Razafindrakoto, talen'ny fikarohana ao amin'ny Institut de recherche pour le développement (IRD na Ivontoeram-Pikarohana ho amin'ny Fampandrosoana). Raha afa-namerina ny fanampiana avy amin'ny firaisamonina iraisampirenena i Hery Rajaonarimamapianina, dia tsy vatrany koa ny namaha ny krizy. Koa mbola omena fehim-potoana hafa indray ve izy sa aleo hiasa ny fifandimbiasam-pahefana ?
Marc Ravalomanana, filoha teo aloha
Rehefa niampanga ny fangalaram-bato nataon'Atoa Didier Ratsiraka (filoha nanomboka taona 1975 ka hatramin'ny taona 1993, avy eo nanomboka taona 1997 ka hatramin'ny taona 2002), dia lasa filoham-pirenena Atoa Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2002 taorian'ny fihodinana voalohany ary na dia tsy nanaiky izany aza ny firaisamonina iraisampirenena.
Tamin'ny taona 2008, tsy araka ny hevitry ny ankamaroan'ny mponina, nihevitra ny hampanofa tany mirefy 1,3 tapitrisa hekitara mandritra ny 90 taona tamin'ny orinasa koreana tatsimo Daewoo Logistics Atoa Marc Ravalomanana. Tamin'ny taona 2009, tratran'ny krizy ara-bola soa aman-tsara ny firenena. Niafara tamin'ny fialany tamin'ny 17 marsa sy ny nanaovany sesintany tany Afrika Atsimo ny fihetsiketseham-panoherana an-dalambe nandritra ny volana maromaro.
Andry Rajoelina, « filohan'ny tetezamita »
Ny androtr'io daty voatonona farany io, nomen'ny tafika ho an'i Andry Rajoelina, Ben'ny tanànan'Antananarivo nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'ny taona 2009 ny fahefana. Saingy voatery izy nanangana ny governemanta iraisana amin'ireo mpanohana ny filoha teo aloha toa an'i Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka ary Albert Zafy. Noho ny fahazoany ny fahefana avy amin'ny miaramila, noteren'ny firaisamonim-pirenena hiala amin'ny fiadidian'ny filoha i Andry Rajoelina ary hikarakara ny fifidianana, izay tsy nataony raha tsy tamin'ny taona 2013. Nandritra ny efa-taona niasany, tsy nitsaha-niakatra nampatahotra ny fahantrana ary tsy nisy na niiba mihitsy aza ny fitomboan-karena.
Tsy isalasalana fa maniry hamaly bontana Atoa Rajoelina amin'izany fanapahan-kevitra hirotsaka amin'ity taona ity izany. Amin'izay fotoana izay anefa tsy maintsy manao izay hanalavirana an'i Maminiaina Ravatomanga, mpandraharaha mpanakarembe sady mpiara-dia aminy izay voampanga ho manao fanadiovam-bola sy mandositra hetra, izy.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, ahiana hisy fifandirana vaovao eo amin'ny politika malagasy indray ny fifidianana ho filoham-pirenena hoavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/16/121404/
 mandeha mandrotsa-bato: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_malgache_de_2018
 ny fitarainany: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/17/madagascar-est-le-seul-pays-qui-s-appauvrit-depuis-soixante-ans-sans-avoir-connu-la-guerre_5216412_3212.html